In Sheekh Maxamed Axmed Nuur uusan ahayn afhayeenka ururka, wax xil ahna uusan ka hayn. Hayeesheen waa xubin xarakada ka tirsan oo 22-sano ku nool dalka dibaddiisa, si dhab ahna aan uga warhayn xalaadda ururka.
Warka uu BBC-da ka sheegayna uusan lahayn sal iyo raad, xaqna uusan u lahayn inuu ku hadlo magaca ururka.
Ururku wuxuu leeyahay mas'uuliyiin iyo golayaal go'aamiya siyaasaddiisa iyo arrimihiisa kala duwan.
Ururku wuxuu leeyahay dastuur iyo xeerar nidaamiya sida lagu qato xilalka iyo sida lagu waayo.